Ungayiqala Kanjani I-Podcast Yebhizinisi Lakho (Ngezifundo Ozifunde Kimi!) | Martech Zone
Ungayiqala Kanjani I-Podcast Yebhizinisi Lakho (Ngezifundo Ozifunde Kimi!)
NgoLwesine, ngoMashi 4, 2021 NgoLwesine, Septhemba 30, 2021 Douglas Karr
Lapho ngiqala i-podcast yami eminyakeni eyedlule, nganginezinhloso ezintathu ezihlukile:
Isiphathimandla - ngokuxoxisana nabaholi embonini yami, bengifuna ukwazi igama lami. Kusebenze nakanjani futhi kuholele emathubeni amahle - njengokusiza ukubamba iqhaza kwe-Dell's Luminaries podcast okuholele ekutheni kube ne-1% ephezulu yama-podcast alalelwa kakhulu ngesikhathi isebenza.
amathemba - Anginamahloni ngalokhu… bekunezinkampani ebengifuna ukusebenzisana nazo ngoba ngibone ukufana kwamasiko phakathi kwamasu ami kanye nezabo. Kusebenze, ngasebenza nezinkampani ezithile ezimangazayo, kufaka phakathi uDell, GoDaddy, SmartFOCUS, Salesforce, Uhlu luka-Angie… nokuningi.
Voice - Njengoba i-podcast yami yayikhula, yanginikeza ithuba lokuhlanganyela nabanye abaholi embonini yami ababenamakhono futhi bekhula kodwa bengaziwa. Anginamahloni ukuthi ngifuna ukwenza i-podcast ifakeke kakhulu futhi ihluke ukwenza ngcono ukubonakala kwayo nokufinyelela kwayo.
Lokho kusho, akulula! Izifundo esizitholile:
Umzamo - umzamo wokucwaninga, ukukhiqiza, ukushicilela, nokukhuthaza okuqukethwe kuthatha isikhathi eside kakhulu kunokwenza ingxoxo. Ngakho-ke ipodcast yemizuzu engama-20 ingathatha amahora amathathu kuye kwayi-3 esikhathi sami ukuyilungisa nokuyishicilela. Leso yisikhathi esibucayi ekuphumeni esimisweni sami futhi sekwenze kwaba nzima kimi ukugcina umfutho.
Momentum - Njengoba ukubhloga kanye nemidiya yezokuxhumana isebenza, kanjalo ne-podcasting. Njengoba ushicilela, uthola abalandeli abambalwa. Lokho okulandelayo kuyakhula futhi kuyakhula… ngakho umfutho ubalulekile empumelelweni yakho. Ngiyakhumbula lapho nganginabalaleli abayikhulu, manje senginamashumi ezinkulungwane.
Kuhlela - Ngikholwa ukuthi bengingakhulisa ukufinyelela kwami ​​ukube bengizimisele ngokwengeziwe ohlelweni lwe-podcast yami. Ngingathanda ukwenza ikhalenda lokuqukethwe ukuze, unyaka wonke, ngigxile esihlokweni esithile. Cabanga nje ngoJanuwari Okthoba eyinyanga ye-e-commerce ukuze ochwepheshe balungiselele isizini ezayo!
Kungani Ibhizinisi Lakho Kufanele Liqale I-Podcast?
Ngaphandle kwezibonelo engizinikeze ngenhla, kukhona okucindezelayo izibalo ngokwamukelwa kwe-podcast lokho kukwenza kube indawo okufanele uyihlole.
Abantu abangama-37% e-US balalele i-podcast ngenyanga edlule.
Abantu abangama-63% bathenga okuthile umphathi we-podcast okhuthazwe embukisweni wabo.
Ngo-2022, kulinganiselwa ukuthi ukulalela i-podcast kuzokhula kube ngabantu abayizigidi eziyi-132 e-United States Alone.
Ezezimali.co.uk, ezezimali zebhizinisi, kanye nocwaningo lokubolekisa nolwazi lomshicileli wewebhusayithi e-UK, wenza umsebenzi omangalisayo ekukuhambiseni kukho konke okudingayo ukuthola i-podcast yakho. I-infographic, Umhlahlandlela Wamabhizinisi Amancane Wokuqalisa I-Podcast uhamba ngezinyathelo ezibucayi ezilandelayo… qiniseka ukuchofoza kokuthunyelwe kwabo lapho bengeza khona ithani lezinsizakusebenza!
Khetha a isihloko nguwe kuphela ongaletha… qiniseka ukusesha i-iTunes, Spotify, SoundCloud, ne-Google Play ukubona ukuthi ungancintisana yini.
Thola okulungile Imakrofoni. Bheka eyami isitudiyo sasekhaya nezincomo zemishini lapha.
Funda ukuthi ungakwenza kanjani hlela i-podcast yakho usebenzisa isoftware yokuhlela efana Ukuziphendulela, I-Garageband (Mac kuphela), I-Adobe Audition (iza ne-Adobe's cloud suite). Kukhona nenani elikhulayo lamapulatifomu nezinhlelo zokusebenza online!
Qopha i-podcast yakho njenge ividiyo ukuze ukwazi ukuyilayisha ku-Youtube. Uzomangala ukuthi bangaki abantu lalela ku-YouTube!
Thola ukusingathwa yakhelwe ngqo ama-podcast. Ama-podcast makhulu, amafayili okusakaza futhi iseva yakho ejwayelekile yewebhu izominyanisa kumkhawulokudonsa odingekayo.
Sine-athikili ejulile yokuthi kuphi phatha, hlanganisa, futhi uphromothe i-podcast yakho ebalula yonke imicimbi ehlukahlukene, ukuhlangana, neziteshi zephromoshini ongazisebenzisa.
Enye insiza engisiza yona (ene-podcast enhle) yi- Inkampani Yokusakaza I-Brassy. UJen usize izinkulungwane zabantu ukuqala nokwakha isu labo lebhizinisi lepodcasting.
O, futhi uqiniseke ukuthi ubhalisela i- Martech Zone Izingxoxo, podcast yami!
Ukudalula: Ngisebenzisa izixhumanisi ezihambisanayo kulesi sihloko.
Tags: ungaqala kanjani i-podcastukuhlela i-podcastabahleli be-podcastimibhobho ye-podcastizibalo ze-podcastamasu we-podcastamathiphu we-podcastamathiphu we-podcastingqala i-podcast
Ukuqopha i-iMovie ngekhamera yewebhu neMakrofoni ehlukile